Kale | Tianjin Yixin tuuboyinka Qalabka Co., Ltd.
Si Ballaaran U Adeegso Mashiinka Alxanka otomaatiga ah ee YIXIN
Qalabka alxanka otomaatiga ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alxanka flange, alxanka tolida toosan, iyo alxanka biibiile qaboojiyaha.
Mashiinka alxanka tooska ah ee YIXIN kuma haboona oo keliya tuubbada iyo alxanka tubbada, laakiin sidoo kale wuxuu u eg yahay alxanka flange, alxanka fidsan, iyo alxanka toosan ee tolida. Kaliya kuma haboona alxanka dhuunta dhulka iyo dhulka hoostiisa, laakiin sidoo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa alxanka sare sida tubooyinka hawo-qaboojinta. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale ku habboon tahay alxanka dhumucda darbiyada kala duwan, sida ugu yar 5mm iyo inta ugu weyn ee 100mm waxay gaari kartaa alxamid qumman. Waa qalab aad u ballaaran oo loo isticmaalo alxanka.
HW-ZD-200 Waxaa Loo Adeegsaday In Lagu Weld Tuubo 85mm oo Adag Iyadoo 100% Pass Pass
Maaddaama ay tahay sheyga ugu sarreeya ee YIXIN, HW-ZD-200 waxaa loo adeegsaday alxanka tuubooyin aad u qaro weyn oo leh dhumucdiisuna dhan tahay 85mm waxaana lagu gaadhay natiijooyin fiican. Waa guul guul u ah alxanka gidaarka qaro weyn ee gudaha iyo dibaddaba.
Bishii Juun 2020, mashruuc dayactir ballaaran oo laga sameeyay aag wabiga koonfureed gaar ah ayaa galay u diyaargarowga degdegga ah. Qaybta hoose ee albaabkeeda wadista wadista waxay ahayd dhuumo aad u qaro weyn oo ballaciisu yahay 2000mm iyo dhumucdiisuna ay tahay 85mm. Mashruuca alxanka ayaa mushkilad weyn ku noqday mashruucan, waxaana iska cad in xalinta dhibaatadan ay noqotay mudnaanta koowaad ee xilligan.
Baadhitaanno badan ka dib, macmiilku wuxuu xiiso weyn u hayaa shirkaddayada HW-ZD-200 dhuumaha dhammaan mashiinka alxanka caqliga badan.
Machadka Heerarka Tayada Wax soosaarka ee Wasaaradda Kheyraadka Biyaha ayaa soo agaasimay kulan gaar ah oo ay la yeesheen khubaro khuseysa dhamaan shirkadaha qandaraaska ku qaatay mashruuca si ay si qoto dheer uga doodaan suurta galnimada habka alxamida ee mashiinka alxanka oo dhan oo caqli badan. go'aansaday in la isticmaalo qalabka loo yaqaan YIXIN's HW-ZD-200 si loo sameeyo baaritaanka alxanka iyo ururinta xogta u qalmidda nidaamka alxanka.
Tijaabadan alxanka darbigiisa birta ah ee qaro weyn wuxuu ahaa guul dhameystiran. Xaaladaha hawlgalka ee xoogga sare, HW-ZD-200 waxaa loo shaqeeyaa si habsami leh oo wanaagsan, iyada oo aan lahayn wax falcelin ah oo diidmo ah sida digniinta cillad-darrada kuleylka ee kuleylka, iyo faragelinta ugu yar ee hawlwadeenka. Ka dib markii alxanka imtixaanka, markhaatiga macaamilka, waxaan ku martiqaadnay shirkad xirfad-yaqaan ah oo kormeer dhinac saddexaad ah si ay u sameyso baaritaanka tayada beedka alxanka, waxaanna si guul leh u gudubnay kormeerka ultrasonic iyo wejiga ee aan burburin. Ugu dambeyntiina, macmiilku wuxuu iibsaday qalab shirkaddayada ah ee HW-ZD-200 oo ah qalabka alxanka ee mashruucan.
Mashruuca waxaa si rasmi ah loo bilaabay Ogosto 1, 2020, qeexitaannada dhexroorka alxanka alxanka waa DN2000 * 70mm iyo DN1500 * 80mm. Alxanka ayaa la soo gabagabeeyay bartamihii bishii Oktoobar, mashruucana wali wuu socdaa. Walxaha la dhammaystiray waxaa lagu tijaabiyaa ogaanshaha cilladda. Ilaa hadda, natiijooyinka imtixaanku waxay leeyihiin sicir aad u sarreeya waxaana si wada jir ah u oggolaaday milkiilaha iyo kooxda dhismaha.
Alxanka tuuboyinka qaro
Alxanka Noromal tuuboyinka